သင်ကဗြိတိန်တွင်အခြေစိုက်ပြီးစတော့ဈေးကွက်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုပါကရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုအကောင့်ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုအွန်လိုင်းစတော့အိတ်ချိန်းရှင်များကအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပြီးစာရင်းသွင်းထားသောကုမ္ပဏီများနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်တိုင်းသင်အခကြေးငွေပေးရမည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၏အကောင်းဆုံး UK Share Dealing Accounts တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရန်အကြံပြုလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိစျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းငါးခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရုံသာမက၊ အကောင့်။
မှတ်စု: အကယ်၍ သင်သည် အစုရှယ်ယာများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန် ရှာဖွေနေပါက၊ လှိုင်းလုံးကြီးများကို တွန်းလှန်ရန် ပြင်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယေဘူယျစည်းမျဉ်းမှာ သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အနည်းဆုံးငါးနှစ်ကြာ ထိန်းထားရန်ဖြစ်သည်။.
Share Dealing Accounts ဆိုတာဘာလဲ။
အွန်လိုင်းမှအစုရှယ်ယာများကို ၀ ယ်ယူရန်နှင့်ရောင်းချရန်အတွက်သင်သည် stockbroker ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်သည်ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် stockbroker ဖြင့်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်သောအခါရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုအကောင့်ကိုဖွင့်လိမ့်မည်။ အစုရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုအကောင့်များကိုမသုံးထားကြောင်းသတိပြုပါ သာ ထိတ်ဝယ်ရောင်း။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၎င်းတို့သည်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေ၊ ETFs ကိုနှင့် ညွှန်းကိန်း.
ထို့ကြောင့်သင်၏ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုအကောင့်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစုစုတစ်ခုလုံးအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြေခံသဘောတရားအရ၊ အစုရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုအကောင့်အများစုသည်တူညီသောလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်၊ သင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်နှင့်ရန်ပုံငွေများထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့နောက်သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို DIY အခြေခံဖြင့်ရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာရှင်သန်နေသောကုမ္ပဏီများကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်ရန်သင်စတော့ဈေးကွက်တွင်ဗဟုသုတရှိရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသို့ပြောကြားခြင်းဖြင့်အသစ်သောကုန်သည်များသည်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများကိုကိုင်တွယ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ ရန်ပုံငွေသည်မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရွေးချယ်ရမည်ကိုရွေးချယ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်သင်သည်နှစ်စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခကြေးငွေပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း၊
အခွန်အခများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်အစုရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုအကောင့်များသည်များသောအားဖြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ကော်မရှင်တစ်ခုနှင့်လာသည်။ အရင်နှင့်စပ်လျဉ်း။ သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်ပမာဏ၏ရာခိုင်နှုန်းကိုသင်ပေးလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၁% သောအက်ပလီကေးရှင်းတွင်ပေါင် ၁၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်သင့်ကို ၁၀ ပေါင်ကျသင့်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သတ်မှတ်ထားသောအခကြေးငွေဖြစ်ပါကသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏမည်မျှပင်ရှိပါစေကော်မရှင်သည်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာပိုမို။
သင့်အိမ်၏ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုမှ စတော့များနှင့် ရှယ်ယာများကို ဝယ်ယူရောင်းချပါ။
အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများ၊ ငွေချေးစာချုပ်များနှင့် အညွှန်းကိန်းများကဲ့သို့သော အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါသည်။
ယခုအခကြေးငွေများသည် လက်လီဝယ်ယူသူများအတွက် အလွန်အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်နေပါပြီ။
အမြတ်ဝေစုများကို သင်၏ ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးအကောင့်သို့ တိုက်ရိုက်ပေးချေပါသည်။
သင်၏ မျှဝေသုံးစွဲရေးအကောင့်ကို ISA နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
အကောင့်ဖွင့်ရန် 10 မိနစ်ထက်မပိုပါ။
ငွေထုတ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ဘဏ်အကောင့်ဖြင့် ငွေသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်ယူခြင်း။
UK အကောင့်များကို FCA မှ ထိန်းချုပ်ထားသည်။
ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခေတ္တရောင်းချရန် သို့မဟုတ် သြဇာအာဏာကို အသုံးချ၍မရပါ။
သင့်ကိုယ်ပိုင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကို ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်သည်။
ထင်ရှားသောအစမှာဗြိတိန်တွင်လူသိများသောကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။ သူတို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းမှာစာရင်းဝင်လိမ့်မယ်။ British American Tobacco, BP, Barclays နှင့် Lloyds တို့၏အတွေးများကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုအကောင့်အများစုသည်သင့်အား FTSE 100 ကုမ္ပဏီ၏စာကြည့်တိုက်တစ်ခုလုံးကို ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
အလားတူစွာရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုအကောင့်များသည်သင့်အား AIM ကိုမကြာခဏဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်။ သတိမထားမိသူများအတွက်ဤသည်ဗြိတိန်အခြေစိုက်စတော့အိတ်ချိန်းသည်လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းအတွက်မလုံလောက်သေးသောအသေးစားနှင့်အလတ်စားကုမ္ပဏီများကိုစာရင်းပြုသည်။ AIM ရှိအစုရှယ်ယာများသည်များသောအားဖြင့်မတည်ငြိမ်သောကြောင့်အနိမ့်ဆုံးငွေထုတ်ချေးမှုခံစားနေရသောကြောင့်ယင်းကိုစိတ်ထဲမှတ်ထားပါ။
သင်သည်ဗြိတိန်မဟုတ်သောစျေးကွက်များသို့ပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားနေပါကရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုအကောင့်အများစုက၎င်းကိုခွင့်ပြုသည်ကိုသင် ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်။ များသောအားဖြင့်ပွဲစားသည်သင့်အားအမေရိကန်၏အဓိကစတော့ဈေးကွက်နှစ်ခုဖြစ်သော NASDAQ နှင့်နယူးယောက်စတော့အိတ်ချိန်းသို့ဝင်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ဒီလိုမျိုး ကုမ္ပဏီတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မယ်။ Apple, Facebook က, ဖို့ဒ်မော်တာ, ဒစ္စနေးနှင့် Nike က. နိုင်ငံတကာစတော့ရှယ်ယာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အခကြေးငွေများကို စစ်ဆေးရန် အရေးကြီးပါသည်။ GBP မှလွဲ၍ အခြားငွေကြေးတစ်ခုတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ကို ကာမိရန် ထပ်ဆောင်းအခကြေးငွေကိုလည်း ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
အညွှန်းကိန်းများ (သို့မဟုတ်ညွှန်းကိန်းများ) သည်သင့်အားကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီကိုရွေးချယ်စရာမလိုဘဲကျယ်ပြန့်သောစတော့စျေးကွက်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုသည်။ ယူကေတွင် ဦး ဆောင်ညွှန်ကိန်းသည် FTSE 100 ဖြစ်သည်။ သတိမထားမိသောသူများအတွက်ယင်းသည်လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်လူသိအများဆုံးသောကုမ္ပဏီ ၁၀၀ ပါဝင်သည်။
ထို့ကြောင့်တစ် ဦး ချင်းရှယ်ယာ ၁၀၀ ၀ ယ်ရန်မလိုတော့ဘဲကုန်သွယ်မှုတစ်ခုတည်းဖြင့်ကုမ္ပဏီ ၁၀၀ လုံးကိုသင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အနိမ့်ဆုံးအညွှန်းကိန်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီ ၅၀၀ ကိုခြေရာခံသည့် S&P 100 ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သင့်တွင်ကဏ္owအမျိုးမျိုးမှကုမ္ပဏီကြီး ၃၀ ကိုခြေရာခံသည့် Dow Jones ရှိသည်။
သင့်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်ဗဟုသုတမရှိသလောက်ဖြစ်ပါကအပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများဟာသူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုယ်စားပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ၀ ယ်ယူရောင်းဝယ်တာပါ။ ထောင်ပေါင်းများစွာသောအခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်သင်၏ငွေများကိုစုဆောင်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ရန်ပုံငွေကိုပေါင်ဘီလျံပေါင်းများစွာစစ်ပွဲကိုပေးသည်။
နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေဖြင့်ရင်းနှီးမြှပ်နှံသည့်အခါသင့်အနေဖြင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခကြေးငွေအနည်းငယ်ပေးရလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်စျေးနှုန်းသင့်လျော်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ရန်ပုံငွေတွင်အဆင့်မြင့်နည်းပညာများဖြင့်အပြည့်အဝထောက်ခံကြမည့်အတွေ့အကြုံရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ရန်ပုံငွေကိုတက်ကြွစွာစီမံခန့်ခွဲသောကြောင့်သင် ၀ င်ငွေမှရရှိသောအသီးအပွင့်များကိုခံစားနိုင်သည်
အစုရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုအကောင့်တစ်ခုလွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သောအပိုဆောင်းဝင်ငွေစီးဆင်းမှုမှာငွေချေးစာချုပ်များနှင့်ဂျီးလ်tsတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ ငွေချေးစာချုပ်များသည်တစ်လုံးတည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်ပြီးပြန်အမ်းငွေအနေဖြင့်ငွေချေးစာချုပ်များရင့်သည်အထိသင်ပုံသေအတိုးနှုန်းကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့လုပ်တဲ့အခါမင်းရဲ့ကန ဦး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအပြည့်အဝပြန်ရလိမ့်မယ်။
Gilts သည်၎င်းတို့သည်ယူကေအစိုးရမှထုတ်ပေးသည့်ချည်နှောင်ခြင်းကဲ့သို့တူညီသောနည်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်စွန့်စားမှုလုံးဝကင်းမဲ့သော်လည်းကမ်းလှမ်းမှုမှရရှိသောအထွက်နှုန်းမှာအလွန်နိမ့်သည်။
Share Dealing Accounts ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်သင်၏အွန်လိုင်းစတော့ဘရုတ်အကောင့်ထဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်ဝယ်ယူခြင်းကဲ့သို့မလွယ်ကူပါ။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကမင်းအတွက်ပါ၊ ဒါပေမယ့်ပွဲစားကိုယ်တိုင်အတွက်မဟုတ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အများကြီးနောက်ကွယ်မှပေါ်သွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်၏ရှေ့ပိုင်းတွင်ပွဲစား၏အဓိကစျေးကွက်များနှင့်ဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်ပွဲစားသည် British American Tobacco ရှယ်ယာများကိုသူ၏ဖောက်သည်များအားဖြန့်ဝေလိုသည်ဟုဆိုပါစို့။
အဓိကစျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ပွဲစားသည်ပွဲစားအစုရှယ်ယာပေါင် ၅၀၀၀၀၀ ကို ၀ ယ်ယူရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ထို့နောက်၎င်းတို့သည် British American Tobacco စတော့ရှယ်ယာများကိုရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုအကောင့်များမှတဆင့်ရောင်းချနိုင်မည်ဖြစ်ရာလမ်းတစ်လျှောက်တွင်အနည်းငယ်မျှသာပါဝင်သည်။
အသစ်သောပွဲစားများကသင့်အားအစုရှယ်ယာများ ၀ ယ်ယူရန်ခွင့်ပြုကြောင်းသတိပြုရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ ဤအရာသည်သင့်ကိုဘဏ်ကိုမချိုးဖောက်ဘဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုရုံသာမကအမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
Share Dealing Accounts၊ အခကြေးငွေများနှင့်ကော်မရှင်များ
ဝေငှရောင်းဝယ်မှုအကောင့်ပွဲစားများသည်ငွေရှာရန်အတွက်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်သောအခါသင်အခကြေးငွေပေးရလိမ့်မည်။ ဤသည်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောကော်မရှင်ပုံစံတစ်ခုသို့မဟုတ်အခကြေးငွေပေးရသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၎င်းနှစ်ခုအကြားခြားနားချက်ကိုသင်သိရန်အရေးကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ရှယ်ယာအမျိုးအစားကိုသတ်မှတ်သင့်သောကြောင့်ဖြစ်သည် ဆက်ဆံခြင်း အကောင့်ဖွင့်သည်အကောင့်
အကယ်၍ အစုရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုအကောင့်ပွဲစားသည်ကော်မရှင်အမျိုးမျိုးကိုကောက်ခံပါကသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏနှင့်သင်၏အခကြေးငွေကိုတွက်ချက်လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပြောရလျှင်ပွဲစားသည်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုလျှင် ၂% ကောက်ခံပြီး BP ရှယ်ယာတွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည်ဆိုပါစို့။
သင် BP တွင် £5,000 တန်ဖိုးရှိ ရှယ်ယာများကို သင်ဝယ်ယူသည်။
ကော်မရှင်၏ 2% တွင်၎င်းသည်အခကြေးငွေ £100 ဖြစ်သည်။
လေးနှစ်အကြာတွင် သင်၏ပေါင် 5,000 BP ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် ယခု £7,500 တန်သောကြောင့် ရှယ်ယာများကို ရောင်းချရန် သင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ကော်မရှင်၏ 2% တွင် £7,500 ရောင်းရမည်ဖြစ်ပြီး အခကြေးငွေမှာ £150 ဖြစ်သည်။
အထက်ပါမှသင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းကုန်သွယ်မှုနှစ်ခုစလုံးတွင် - ပြောင်းလဲမှုရှိသည့်ကော်မရှင်များသည်ကုန်သွယ်မှု၏အဆုံးသတ်တွင်ကျသည် ဝယ်ခြင်း ဘယ်အချိန်မှာလဲ ရောင်းချ။ အရေးကြီးသည်မှာသင်သည်သေးငယ်သောပမာဏကိုသာရောင်းဝယ်ရန်စီစဉ်ထားပါကအခကြေးငွေအမျိုးမျိုးကိုရွေးချယ်သင့်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုအကြီးအကျယ်အခကြေးငွေနဲ့ဒဏ်ခတ်လိမ့်မယ်။
အစုရှယ်ယာရောင်းဝယ်သူအကောင့်ပွဲစားသည်အငှားချထားပါကအခကြေးငွေဘယ်တော့မျှပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ပါ။ သင်£ 1 လားပေါင် ၁၀၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုလျှင်ပေါင် ၅ မှ ၁၂ ပေါင်အထိရှိနိုင်သဖြင့်စျေးဝယ်ခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်အားနည်းသောပွဲစားများသည်အသားအရေနှင့်အရိုးဝန်ဆောင်မှုများကိုပုံမှန်အားဖြင့်ပေးလေ့ရှိသည်။
တစ်နည်းပြောရလျှင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသောရှယ်ယာများကို ၀ ယ်နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်းသုတေသန၊ ပညာရေးဆိုင်ရာကိရိယာများသို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ၏ထိပ်တန်းထောက်ခံချက်ပုံစံမျိုးဖြင့်သင်ဘာမှမရနိုင်ပါ။ အမြောက်အမြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စီစဉ်ထားသောသင့်အတွက်ပြားပြားသောအခကြေးငွေပေးစနစ်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါကမင်းကိုစောင့်ရှောက်လိမ့်မယ် အွန်လိုင်းကုန်သွယ် တစ် ဦး အကြွင်းမဲ့အာဏာနိမ့်ဆုံးရာခိုင်နှုန်းပညာမှကုန်ကျစရိတ်။
နှစ်စဉ်ကြေး သင်အနေဖြင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးတူရန်ပုံငွေမှတစ်ဆင့် passive ဝင်ငွေကိုရှာဖွေရန်ဆုံးဖြတ်ပါကနှစ်စဉ်ကြေးပေးရလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်တစ်နှစ်လျှင် ၁% ထက်ပိုပြီးရှားပါးပြီးသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစုစုပေါင်းတန်ဖိုးအပေါ်မူတည်သည်။
ပလက်ဖောင်းကြေး တစ် ဦး ပလက်ဖောင်းအခကြေးငွေကြောင့်ပွဲစားများကတိုက်ရိုက်ကောက်ခံသောအခအဖြစ်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခကြေးငွေနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ၎င်းသည်စင်မြင့်ကိုအသုံးပြုရန်သင်ပေးရသောအဖိုးအခဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သုံးလတစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်အခကြေးငွေပေးသည်။
နိုင်ငံတကာစျေးကွက်များ မတူဘဲ CFD ပလပ်ဖောင်းများ၊ ရှယ်ယာအရောင်းအ၀ယ်ပွဲစားများသည် New York စတော့အိတ်ချိန်း သို့မဟုတ် NASDAQ ကဲ့သို့သော နိုင်ငံတကာစျေးကွက်များသို့ ဝင်ရောက်ရန် သင့်အား အခကြေးငွေကောက်ခံဖွယ်ရှိသည်။
ငွေကြေးလဲလှယ်မှု: GBP တွင်မဖော်ပြသောပစ္စည်းအတန်းတစ်ခုတွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဆုံးဖြတ်ပါကငွေကြေးလဲလှယ်မှုအခကြေးငွေကိုသင်ပေးရမည်။
Share Dealing Account တစ်ခုဖွင့်နည်း
အဆင့် ၁ - Share Dealing Account ပွဲစားကိုရွေးချယ်ပါ
သင်ပထမ ဦး ဆုံးယူကေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုအကောင့်များပေးထားသောအွန်လိုင်းစတော့အိတ်ချိန်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင့်တွင်ပွဲစားလုပ်ရန်သင်အချိန်မရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့လမ်းညွှန်တွင်ဖော်ပြထားသောပလက်ဖောင်းငါးခုအနက်မှတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင့်တွင်အချိန်ရှိပါကသင်စာရင်းသွင်းခြင်းမပြုမီအချက်များစွာကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ စည်းမျဉ်းများ၊ အခကြေးငွေများ၊ ကော်မရှင်များ၊ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများနှင့်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများကိုအဓိကထားသင့်သည်။
အဆင့် ၂ - Share Dealing Account တစ်ခုဖွင့်ပါ
အကယ်၍ ပွဲစားသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုများစွာစုဆောင်းရန်လိုအပ်သည်ကိုသင်သိလိုပါက၎င်းတို့သည်သင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကိုအီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်အတည်ပြုရန်ကြိုးစားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်တတိယပါတီရင်းမြစ်များမှတဆင့်၎င်းကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါကသင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မိတ္တူတစ်ခုနှင့်လိပ်စာအထောက်အထားများကိုတင်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုနိုင်သည်။
အဆင့် ၃ - သင်၏ဝေစုအကောင့်ကိုရန်ပုံငွေထည့်ပါ
သင်၏ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုအကောင့်ကိုသင်တည်ထောင်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုသင်ရန်ပုံငွေလိုအပ်လိမ့်မည်။ အချို့သောအွန်လိုင်းပွဲစားများကသင်၏ဘဏ်အကောင့်မှငွေပမာဏအနည်းငယ်ကိုထည့်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာသင်သည်အကောင့်ပိုင်ရှင်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်နှင့်ငွေထုတ်ယူခြင်းကိုနောက်ထပ်ပြုလုပ်ရန်နှောင့်နှေးမှုများကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ဤသို့ဖြစ်ခဲ့လျှင်ပွဲစားသည်ရန်ပုံငွေသို့လွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်သည့်ဘဏ်စာရင်းအသေးစိတ်ကိုပေးလိမ့်မည်။ တနည်းအားဖြင့်အချို့သောအွန်လိုင်းပွဲစားများကသင်၏ငွေထုတ်ကဒ်ကိုငွေသွင်းရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ များသောအားဖြင့်ဤအရာသည်သင်၏အကောင့်ထဲသို့ချက်ချင်းအသိအမှတ်ပြုခံရသည့်ရန်ပုံငွေများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အဆင့် ၄: သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတန်းအစားကိုရွေးချယ်ပါ
ယခုတွင်သင့်တွင်အပြည့်အ ၀ ငွေကြေးထောက်ပံ့သည့်အရစ်ကျအကောင့်တစ်ခုရှိလာပြီဆိုလျှင်သင်၏အစုရှယ်ယာတွင်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများထည့်သွင်းလိုကြောင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်၊ သင်သည်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထုတ်ကုန်များဖြစ်သောငွေချေးစာချုပ်များ၊ ညွှန်းကိန်းများသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများကဲ့သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုပါကပွဲစား ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏သက်ဆိုင်ရာအပိုင်းသို့သွားပါ။
သင်ပြုလုပ်လိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုကိုသင်သတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်ပေါင်နှင့် pence အတွင်းထည့်သွင်းလိုသည့်ပမာဏကိုရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ပေါင် ၁၀၀၀ တန်သော Barclays ရှယ်ယာများကို ၀ ယ်လိုပါက Order box ထဲသို့ပေါင် ၁၀၀၀ ကိုထည့်ပြီးကုန်သွယ်မှုကိုအတည်ပြုပါ။
အကယ်၍ သင်သည် ၀ င်ငွေကိုရရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - ဥပမာ - ခွဲဝေပေးသောအစုရှယ်ယာသို့မဟုတ်ငွေချေးစာချုပ်များဖြစ်ပါကသင်၏သက်ဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုများကိုသင်၏အရစ်ကျငွေစာရင်းသို့တိုက်ရိုက်ဖြန့်ဝေလိမ့်မည်။ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုယင်းကိုသင်ထုတ်ယူနိုင်သည်။
အဆင့် ၆ - သင်၏ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုအကောင့်တွင်ငွေသားထည့်ခြင်း
သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုသင်ငွေသားထုတ်ယူနိုင်သည်၊ မပြုလုပ်သည်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, စျေးကွက်နာရီအတွင်းမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုစတော့ရှယ်ယာများနှင့်အစုရှယ်ယာများကိုထုတ်ယူနိုင်သည်။ အနိမ့်ဆုံးရွေးနှုတ်ခြင်းသက်တမ်းကိုသင်လိုအပ်နိုင်သော်လည်းနှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများသည်လည်းအတော်အတန်အရည်အချင်းပြည့်ဝသည်။
တစ်ခြားသောအဆုံးတွင်ငွေချေးစာချုပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုငွေထုတ်ချေးရန်သင်အခက်တွေ့နိုင်သည်။ အကြောင်းမှာသင်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ငွေချေးစာချုပ်များရင့်ကျက်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကိုဖြေရှင်းရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာရှယ်ယာအရောင်းအဝယ်လုပ်သောအကောင့်ပွဲစားသည်ဒုတိယစျေးကွက်များသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
Share Dealing အကောင့်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
the stockbroker ကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသလား FCA?
your သင်၏ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုအကောင့်ကို ISA နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသလား။
the ပွဲစားသည်တစ်စုံတစ်ရာသောအခကြေးငွေ (သို့) ပြားချပ်ချပ်ကြေးပေးပါသလား။ ကော်မရှင်များဘယ်လောက်ကျပါသလဲ
SE NYSE သို့မဟုတ် NASDAQ ကဲ့သို့သောနိုင်ငံတကာစျေးကွက်များသို့ ၀ င်ရောက်ရန်အတွက်အခကြေးငွေများရှိပါသလား။
အကောင်းဆုံး Share Dealing Accounts UK – ဘယ်ပွဲစားက အကောင်းဆုံးလဲ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပွဲစားလုပ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးလား။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်ဆုံး UK ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုအကောင့် ၅ ခုကိုစစ်ဆေးပါ။
UK ရှိ အကောင်းဆုံး Share Dealing အကောင့်များအကြောင်း နိဂုံးချုပ်
သင်၏လမ်းညွှန်ကိုတစ်လျှောက်လုံးဖတ်ပြီးပါပြီ၊ ယခုသင်ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုအကောင့်များ၊ သူတို့မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပြုလုပ်မီမည်သည့်အရာများအားလေ့လာသင့်သည်ကိုအပြည့်အဝနားလည်ရပါလိမ့်မည်။
၎င်းတွင်ပွဲစားကသင့်အားရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုထားသောပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများ၊ သင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစျေးကွက်များသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေအရေးကြီးသည်။ ကုန်သွယ်ရေးအတွက်သင်မည်သည့်အခကြေးငွေပေးဆောင်ရမည်နည်း။
အစုရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုအကောင့်များစွာကိုယခုဈေးကွက်ထဲ၌ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၀ ၏ထိပ်ဆုံး ၅ ခုကိုစာရင်းပြုစုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်သင့်အနေဖြင့်ပွဲစားမ၏အခကြေးငွေဖွဲ့စည်းပုံကိုကောင်းစွာနားလည်ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုအကောင့်သည်သင့်အိမ်မှသက်သောင့်သက်သာရှိသောရှယ်ယာများ၊ ငွေချေးစာချုပ်များ၊ အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများ၊ ETFs နှင့်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများတွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုသည်။ အဆိုပါအကောင့်ကိုသူ့ဟာသူတစ် ဦး စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် stockbroker ကပေးအပ်သည်။
၎င်းသည်အကောင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားနိုင်သည်။ ထိုအရာကိုပြောရလျှင်၊ ဒီစာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားတဲ့ပွဲစားတစ်ယောက်ကသင့်ကို£ 1 နဲ့စတင်ခွင့်ပြုပါတယ်။
အစုရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုအကောင့်ကြေးသည်လစဉ်ငွေကြေး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစျေးကွက်နှင့်ငွေကြေးပြောင်းလဲခြင်းစသည့်ပုံစံနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသည်။ သို့သော်သင်သတိထားရမည့်အဓိကအခကြေးငွေမှာရောင်းဝယ်မှုဖြစ်သည်။ သင်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုကို ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းသည့်အခါတိုင်းဤသည်ကိုအပြောင်းအလဲတစ်ခုသို့မဟုတ်ပြားချပ်ချပ်အခအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
ဟုတ်ပါသည်၊ ယူကေရှိရှယ်ယာအရောင်းအဝယ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာပွဲစားများကို FCA မှထိန်းချုပ်သည်။
သင်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်သင်သည် debit ကဒ်သို့မဟုတ်ဘဏ်ငွေလွှဲရွေးမှုကိုရွေးချယ်သည်။ ပွဲစားများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်လိုပါကသင့်အားလစဉ်တိုက်ရိုက်ငွေသွင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
မဟုတ်ပါ၊ CFD ပွဲစားသို့မဟုတ်ဘဏ္derivာရေးဆင်းသက်လာသည့်ပလက်ဖောင်းဖြင့်သာသင်သြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင့်တွင်အွန်လိုင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွင်အတွေ့အကြုံမရှိလျှင်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ ရန်ပုံငွေသည်သင်၏ကိုယ်စားသင်၏ငွေကြေးများကိုစီမံခန့်ခွဲလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင့်တွင် passive ဝင်ငွေရရှိရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။